कहाँ कहाँ बढ्यो बाढी पहिरोको जोखिम, देशै भरी कतिभयाे क्षति ? — Imandarmedia.com
कहाँ कहाँ बढ्यो बाढी पहिरोको जोखिम, देशै भरी कतिभयाे क्षति ?
काठमाडौं । अविरल बर्षापछिको बाढी पहिरोले देशका विभिन्न भूभागमा क्षति पुर्‍याएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले निरन्तरको बर्षाले बाढी तथा पहिरोको जोखिममा बढोत्तरी हुने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै सतर्कता अपनाउन सबैमा आग्रह गरेको छ।